Intloko ebuhlungu yemihla ngemihla
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa ngoMatshi 30, 2021.
Uninzi lwabantu luphathwa yintloko amaxesha ngamaxesha. Kodwa ukuba unentloko engaphezulu kweentsuku kunokuba kungenjalo, unokuba neentloko ezingapheliyo zemihla ngemihla.
Endaweni yohlobo oluthile lwentloko, iintloko ezingapheliyo zemihla ngemihla zibandakanya iintlobo ngeentlobo zentloko. Isifo esinganyangekiyo sibhekisa kaninzi kangakanani kwintloko ebuhlungu kwaye imeko ithatha ixesha elingakanani.
Ubume obuhlala buhleli beentloko ezingapheliyo zemihla ngemihla babenza babe yenye yezona meko zibangela iintlungu. Unyango lokuqala olunobundlongondlongo kunye nozinzo, ulawulo lwexesha elide lunokunciphisa iintlungu kwaye lukhokelele kwiintloko ezimbalwa.
Ngokwenkcazo, iintloko ezingapheliyo zemihla ngemihla zenzeka kwiintsuku ezili-15 okanye nangaphezulu ngenyanga, ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Kuyinyani (ephambili) iintloko ezingapheliyo zemihla ngemihla azibangelwa yenye imeko.
Kukho iintloko ezihlala ixesha elide kwaye zihlala ixesha elide ezingapheliyo. Iintloko ezihlala ixesha elide zihlala ngaphezulu kweeyure ezine. Ziquka:
Uhlobo lweentloko ezingapheliyo
Intloko yentloko entsha eqhubekayo
Olu hlobo luhlala luvela kubantu abanembali ye-episodic migraines. I-migraine engapheliyo ithambekele ekubeni:
Ukuchaphazela elinye icala okanye omabini amacala entloko yakho
Yiba nemvakalelo yokutshiza, yokubetha
Isizathu sokuba buhlungu ngokuphakathi
Kwaye babangela okungenani enye yezi zinto zilandelayo:
Isihlunu, ukugabha okanye zombini
Ubuntununtunu ekukhanyeni nakwisandi
Ezi ntloko zihlala:
Ukuchaphazela omabini amacala entloko yakho
Yenza iintlungu eziphakathi ukuya kweziphakathi
Isizathu sokuba uvakale uziva ucinezela okanye uqinisa, kodwa hayi ukubetha
Ezi ntloko ziza ngokukhawuleza, ngokuqhelekileyo kubantu abangenayo imbali yentloko. Zihlala zingapheli kwiintsuku ezintathu zentloko yakho yokuqala. Bona:
Rhoqo uchaphazela omabini amacala entloko
Yenza iintlungu eziba ngathi ucinezela okanye uqinisa, kodwa hayi ukubetha
Unokuba neempawu ze-migraine engapheliyo okanye uhlobo lweentloko ezingapheliyo
Ukuchaphazela kuphela icala elinye lentloko
Ngaba yimihla ngemihla kwaye iyaqhubeka ngaphandle kwamaxesha angenazintlungu
Yenza iintlungu eziphakathi kunye neepikhi zentlungu ebukhali
Phendula kunyango lwe-indomethacin (Indocin)
Unokuba nzima ngokuphuhliswa kweempawu ezifana ne-migraine
Ukongeza, iintloko zehemicrania Continua zinxulunyaniswa nenye yezi zilandelayo:
Ukukrazula okanye ukuba bomvu kweliso kwicala elichaphazelekayo
Ukuxinana kwempumlo okanye impumlo egudileyo
Ukujikisa ijwabu leso okanye ukunciphisa umfundi
Ukuqaqanjelwa yintloko ngamanye amaxesha kuqhelekile, kwaye kuhlala kungafuneki kunyango. Nangona kunjalo, qhagamshelana nogqirha wakho ukuba:
Iityuwa zokuhlamba (iziyobisi)
Uhlala uneentloko ezimbini okanye ngaphezulu ngeveki
Uthatha ukuphelisa iintlungu kwintloko yakho kwiintsuku ezininzi
Udinga ngaphezu kwethamo elinconywayo lonyango lwe-over-the-counter ukuze unciphise iintloko zakho
Iipatheni zakho zentloko ziyatshintsha okanye iintloko zibuhlungu
Iintloko zakho ziyakhubaza
Funa unyango ngokukhawuleza ukuba ngaba intloko yakho:
Ngequbuliso kwaye ibukhali
Ehamba nomkhuhlane, intamo elukhuni, ukudideka, ukuxhuzula, ukubona kabini, ubuthathaka, ukuba ndindisholo okanye ukuthetha nzima
Ulandela ukwenzakala entloko
Iba mandundu nangona iphumla kwaye iyeza leentlungu
Unobangela weentloko ezininzi ezingapheliyo zemihla ngemihla aziqondwa kakuhle. Inyaniso (ephambili) engapheliyo yintloko yemihla ngemihla ayinaso isizathu esichazayo.
Imiqathango enokubangela ukuba iintloko ezingapheliyo zentloko zibandakanya:
Ukudumba okanye ezinye iingxaki ngemithambo yegazi ngaphakathi nangakujikeleze ingqondo, kubandakanya ukubetha
Uxinzelelo lwe-intracranial oluphezulu kakhulu okanye oluphantsi kakhulu
Ukonzakala kwengqondo ebuhlungu
Amayeza asetyenziswa gwenxa yintloko
Olu hlobo lwentloko luhlala lukhula kubantu abane-episodic headache disorder, ihlala i-migraine okanye uhlobo loxinzelelo, kwaye ithatha amayeza eentlungu kakhulu. Ukuba uthatha amayeza entlungu- nangaphezulu kwe-ekhawuntareni- ngaphezulu kweentsuku ezimbini ngeveki (okanye iintsuku ezilithoba kwinyanga), usemngciphekweni wokukhula nentloko ebuyayo.
Izinto ezinxulumene nokukhula kwentloko rhoqo kubandakanya:
Ukusetyenziswa gwenxa kwecaffeine
Ukusetyenziswa gwenxa kwamayeza entloko
Ezinye iimeko ezingapheliyo zentlungu
Ukuba uneentloko ezingapheliyo zemihla ngemihla, kunokwenzeka ukuba ube noxinzelelo, uxinzelelo, ukuphazamiseka kokulala, kunye nezinye iingxaki zengqondo nezomzimba.
Ukuzikhathalela kunokunceda ukunciphisa iintlungu ezingapheliyo zemihla ngemihla.
ungayisebenzisa i-hydrocortisone enjeni
Gwema izinto ezibangela intloko. Ukugcina idayari yentloko kunokukunceda uqonde ukuba yintoni ebangela iintloko zakho ukuze uphephe okubangela. Faka iinkcukacha malunga nayo yonke intloko, njengokuba iqala nini, wenzani ngelo xesha kwaye lide kangakanani.
Kuphephe ukusebenzisa kakhulu amayeza. Ukuthatha amayeza entloko, kubandakanya amayeza angaphezulu kwekhawuntareni, ngaphezulu kokuphindwe kabini ngeveki kunokwandisa ubungqongqo kunye nokuhamba rhoqo kwentloko yakho. Qhagamshelana nogqirha wakho malunga nendlela yokuzikhupha kwiyeza ngenxa yokuba kunokubakho nemiphumo emibi xa yenziwe ngokungafanelekanga.
Lala ngokwaneleyo. Umndilili wabantu abadala ufuna iiyure ezisixhenxe ukuya kwezisibhozo zokulala ubusuku bonke. Kungcono ukuba ulale kwaye uvuke ngexesha elifanayo yonke imihla. Thetha nogqirha wakho ukuba unengxaki yokulala, njengokurhola.
Musa ukutsiba izidlo. Yitya ukutya okusempilweni ngamaxesha afanayo imihla ngemihla. Kuphephe ukutya okanye iziselo, ezinjengezo zinekhafini, ezibonakala ngathi zibangela iintloko. Nciphisa umzimba ukuba utyebe kakhulu.
Zilolonge rhoqo. Ukuziqhelanisa nomsebenzi we-aerobic rhoqo kunokuphucula impilo yakho ngokwasemzimbeni nangokwengqondo kunye nokunciphisa uxinzelelo. Xa ugqirha wakho elungile, khetha izinto ozithandayo-njengokuhamba, ukuqubha okanye ukuhamba ngebhayisikile. Ukuphepha ukwenzakala, qalisa kancinci.
Ukunciphisa uxinzelelo. Uxinzelelo yinto ebangela iintlungu ezingapheliyo. Lungelelana. Cwangcisa ucwangciso lwakho. Cwangcisa kwangaphambili. Hlala ulungile. Zama iindlela zokunciphisa uxinzelelo, ezinje ngeyoga, tai chi okanye ukucamngca.
Nciphisa icaffeine. Ngelixa amanye amayeza entloko ebandakanya icaffeine kuba inokuba luncedo ekunciphiseni iintlungu zentloko, inokubangela iintlungu ukuba zibe mandundu. Zama ukunciphisa okanye ukuphelisa i-caffeine ekudleni kwakho.
Ugqirha wakho uya kuvavanya iimpawu zokugula, usulelo okanye iingxaki zemithambo-luvo kwaye abuze malunga nembali yentloko.
Ukuba unobangela weentloko zakho uhlala ungaqinisekanga, ugqirha wakho unokuyalela iimvavanyo zokucinga, ezinje nge-CT scan okanye iMRI, ukukhangela imeko yonyango engaphantsi.
Unyango lwemeko engaphantsi luhlala luyeka iintloko rhoqo. Ukuba akukho meko ifunyenweyo, unyango lujolise ekuthinteleni iintlungu.
Iindlela zokuthintela ziyahluka, kuxhomekeka kuhlobo lwentloko onayo nokuba ukusetyenziswa gwenxa kwamayeza kunegalelo kwintloko yakho. Ukuba uthatha ukuphelisa iintlungu ngaphezulu kweentsuku ezintathu ngeveki, inyathelo lokuqala inokuba kukuzilumla kwezi ziyobisi ukhokelwa ngugqirha.
Xa ulungele ukuqala unyango lokukhusela, ugqirha unokucebisa:
Ukudakumba. I-Tricyclic antidepressants- njenge nortriptyline (Pamelor) -inokusetyenziselwa ukunyanga iintloko ezingapheliyo. La mayeza anokunceda ekunyangeni uxinzelelo, uxinzelelo kunye nokuphazamiseka kokulala okusoloko kuhamba nentloko engapheliyo yemihla ngemihla.
Ezinye i-anti-depressants, ezinje nge-serotonin reuptake inhibitor (SSRI) fluoxetine (Prozac, Sarafem, others), inokunceda ekunyangeni uxinzelelo kunye noxinzelelo, kodwa khange ziboniswe ukuba zisebenza ngakumbi kune-placebo yentloko.
Ibhlokhi yeBeta. La machiza, aqhelekileyo asetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi oluphezulu, ikwangoyena ndoqo wokuthintela i-episodic migraines. Oku kubandakanya i-atenolol (Tenormin), metoprolol (Lopressor, Toprol-XL) kunye nepropranolol (Inderal, Innopran XL).
Amayeza okulwa nokuthimba. Ezinye iziyobisi ezichasayo zibonakala zikhusela i-migraines kwaye zingasetyenziselwa ukukhusela iintloko ezingapheliyo zemihla ngemihla, ngokunjalo. Izinketho zibandakanya i-topiramate (Topamax, Qudexy XR, ezinye), i-divalproex sodium (Depakote) kunye ne-gabapentin (Neurontin, Gralise).
Ii-NSAID. Amachiza amachiza angenayo intsholongwane - njenge-naproxen sodium (Anaprox, Naprelan) -inokuba luncedo, ngakumbi ukuba urhoxa kwezinye iintlungu. Zingasetyenziselwa ngamathuba athile xa intloko ibuhlungu kakhulu.
Ityhefu yeBotulinum. InalotulinumtoxinA (Botox) inaliti ibonelela ngoncedo kwabanye abantu kwaye inokuba yindlela efanelekileyo kubantu abanganyamezeliyo amayeza emihla ngemihla. I-Botox inokuthi ithathelwe ingqalelo ukuba iintloko zinempawu ze-migraines ezingapheliyo.
Ukusetyenziswa kwelinye ichiza kukhethwa, kodwa ukuba ichiza elinye alisebenzi ngokwaneleyo, ugqirha wakho unokucinga ngokudibanisa iziyobisi.
Kubantu abaninzi, unyango olongezelelweyo okanye olongezelelweyo lunikeza ukukhululeka kwintlungu yesifo. Kubalulekile ukuba ulumke, nangona kunjalo. Ayizizo zonke iindlela zonyango ezongezelelekileyo okanye ezizezinye eziye zafundwa njengonyango lwentloko, kwaye ezinye zifuna ukuqhubeka kophando.
Unyango. Obu buchule bamandulo busebenzisa iinaliti ezinwele ebhityileyo ezifakwe kwiindawo ezininzi zolusu lwakho kwiindawo ezichaziweyo. Ngelixa iziphumo zixubekile, ezinye izifundo zibonise ukuba i-acupuncture inceda ukunciphisa isantya kunye nokuqina kwentloko engapheliyo.
Ukubuyela umva. Unokwazi ukulawula iintloko ngokuzazi ngakumbi kwaye utshintshe iimpendulo ezithile zomzimba, ezinje ngokuqina kwemisipha, ukubetha kwentliziyo kunye nobushushu besikhumba.
Ukuphulula. Ukuphulula kunganciphisa uxinzelelo, kunciphise iintlungu kwaye kukhuthaze ukuphumla. Nangona ixabiso lonyango lwentloko lungakhange limiselwe, i-massage inokuba luncedo ngakumbi ukuba unezihlunu eziqinileyo ngasemva kwentloko yakho, intamo kunye namagxa.
Iherbs, iivithamini kunye neeminerali. Obunye ubungqina bukhona bokuba i-herbs feverfew kunye ne-butterbur zinceda ukuthintela i-migraines okanye ukunciphisa ubunzima bazo. Idosi ephezulu yevithamini B-2 (riboflavin) nayo inokunciphisa imigraines.
Izongezo zeCoenzyme Q10 zinokuba luncedo kwabanye abantu. Kwaye izongezo zomlomo ze-magnesium sulfate zinokunciphisa ukuphindaphindeka kwentloko kwabanye abantu, nangona izifundo zingavumelani zonke.
Buza ugqirha wakho ukuba ezi zonyango zilungile kuwe. Sukusebenzisa i-riboflavin, i-feverfew okanye i-butterbur ukuba ukhulelwe.
Ukuvuselelwa kombane kwimbilini ye-occipital. I-elektrode encinci enikwe amandla ebhetri ifakwa ngotyando kufutshane ne-occipital nerve kwisiseko sentamo yakho. I-electrode ithumela ukubetha kwamandla okuqhubekayo kwimithambo-luvo ukunciphisa iintlungu. Le ndlela ithathwa njengophando.
Ngaphambi kokuzama unyango olongezelelweyo okanye olunye unyango, xoxa ngengozi kunye nezibonelelo kunye nogqirha wakho.
Intloko ebuhlungu yemihla ngemihla inokuphazamisa umsebenzi wakho, ubudlelwane bakho kunye nomgangatho wobomi. Nanga amacebiso anokukunceda umelane nale mingeni.
Thatha ulawulo. Zibophezele kukuphila ubomi obanelisayo. Sebenza nogqirha wakho ukwenza isicwangciso sonyango esikusebenzelayo. Zinyamekele kakuhle. Yenza izinto ezikukhuthazayo.
Funa ukuqonda. Ungalindeli ukuba abahlobo kunye nabantu obathandayo bazi ukuba yintoni elungileyo kuwe. Buza malunga nento oyifunayo, nokuba lixesha lokuba wedwa okanye ingqalelo encinci ehlawulwe kwintloko yakho.
Jonga amaqela enkxaso. Unokukufumanisa kuluncedo ukuthetha nabanye abantu abaneentloko ezibuhlungu.
Cinga ngokucebisa. Umcebisi okanye ugqirha unika inkxaso kwaye unokukunceda ekulawuleni uxinzelelo. Ingcali yakho inokukunceda uqonde iziphumo zengqondo zentlungu yakho ebuhlungu. Ukongeza, kukho ubungqina bokuba unyango lokuziphatha kwengqondo lunokunciphisa ukubanda kwentloko kunye nobukrakra.
Kuya kufuneka uqale ngokubona ugqirha wosapho okanye ugqirha ngokubanzi. Nangona kunjalo, unokuthunyelwa kwingcali yentloko.
Nazi ezinye iinkcukacha zokukunceda ulungele ukuqeshwa kwakho.
Yazi imiqobo yaphambi kokuqeshwa. Xa usenza idinga, buza ukuba ikhona into ekufuneka uyenzile kwangaphambili, njengokuthintela ukutya.
Gcina incwadi yeentloko, kubandakanya xa intloko nganye yenzekile, ihlala ixesha elingakanani, ibinzima kangakanani, into oyenzayo kwangoko ngaphambi kokuba intloko iqale, nayo nayiphi na into eyaziwayo malunga nentloko.
Bhala phantsi iimpawu zakho naxa aqala khona.
Bhala phantsi ulwazi oluphambili lomntu, kubandakanya uxinzelelo olukhulu okanye utshintsho lwamva nje lobomi kunye nembali yosapho yentloko.
Dwelisa onke amayeza, iivithamini okanye izongezo ozithathayo, kubandakanya iidosi kunye nokusetyenziswa rhoqo. Faka amayeza ayesetyenziswa ngaphambili.
Bhala phantsi uluhlu lwemibuzo ukubuza ugqirha wakho.
Thatha ilungu losapho okanye umhlobo, ukuba kunokwenzeka, ukukunceda ukhumbule ulwazi.
ndingayithatha i-benadryl nge-sudafed
Ngeentloko ezingapheliyo, eminye imibuzo ukubuza ugqirha ibandakanya:
Yintoni enokubangela iintloko zam?
Zeziphi ezinye izizathu ezinokubangela?
Zeziphi iimvavanyo endizifunayo?
Ngaba imeko yam inokuba yeyokwexeshana okanye inganyangeki?
Ngaba kufuneka ndibonane nengcali?
Ngaba zikhona izinto eziprintiweyo endinokuba nazo? Zeziphi iwebhusayithi ozicebisayo?
Unganqikazi ukubuza eminye imibuzo.
Ugqirha wakho unokukubuza imibuzo, enje:
Ngaba iintloko zakho beziqhubeka okanye ngamanye amaxesha?
Zibuhlungu kangakanani iintloko zakho?
Yintoni, ukuba kukho nantoni na, ebonakala ngathi iyaziphucula iintloko zakho?
Yintoni, ukuba kukho nantoni na, ebonakala ngathi iyazonakalisa iintloko zakho?
Into onokuyenza okwangoku
Ukunciphisa iintlungu zentloko de ubone ugqirha, unga:
Gwema imisebenzi eyonakalisa iintloko zakho.
Zama amayeza okuphelisa iintlungu ngaphezulu kwekhawuntareni- njenge-naproxen sodium (Aleve) kunye ne-ibuprofen (Advil, Motrin IB, nabanye). Ukuthintela ukubuyela entlokweni, ungathathi ngaphezulu kwesihlandlo kathathu ngeveki.
seta iqela lasekhaya windows 10
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-suboxone emadodeni
isetyenziselwa ntoni ichiza kakuhle
ungawongeza njani umculo kwi-imovie
Iindleko ze-generic fluorouracil cream